Google inoda asi haigone, aya ndiwo mamodheru eMODE | Ndinobva mac
Mukuedza kukuzivisa iwe nezvenyaya dzinoitika dzakatenderedza zvigadzirwa zvemaapuro akarumwa, nhasi tinokuunzira mifananidzo yezvakaiswa neGoogle pamusika mwedzi mishoma yapfuura, maMODE mabhandi. Izvo ndezve tambo mune zvakajeka iwe unogona kuona kukurudzira kweiyo Apple Watch tambo.
Kana tikatanga kuongorora zvishoma mumusika tinogona kuona kuti vagadziri vakasiyana vewadhi yedhijitari, kunyanya Android Wear havana kumira kuisa mamodheru pakutengesa asi havana kumira kuti vatengesewo pfungwa yemabhande anochinjika kwavari.
Google yakaona uyu musika niche uye ikadzika kubhizimusi kusvikira mwedzi mishoma yapfuura ivo vaunza mabhanhire eMODE. Sezvauri kuona mumifananidzo, ivo vanonamatira kune chero wachi neyakajairwa crossbar system kuti chero iyo iyo Android Wear yawakatenga inogona kuishandisa.
Nekudaro, kunyangwe hazvo iyo pfungwa yakanaka, ichiri kopi yezvakapihwa nevaya vanobva kuCupertino panguva iyoyo, kunyangwe vachitarisisa pfungwa, iyo yeiyo apuro iri nyore kwazvo uye inoyevedza. Tambo dzatiri kutaura nezvadzo dzakagadzirwa mukubatana naHadley Roma b & nd, ichivabvumidza kuchinjaniswa mumasekondi.
Iyo tambo inosanganisa michina iri muchimiro chepini iyo nekuifambisa inotibvumira kusunungura tambo kukwanisa kuchinjanisa zviri nyore. Google MODE tambo dzinongowanikwa chete mumusika weUS uye Iwo anotengwa pamadhora makumi mashanu kune ayo akagadzirwa epurasitiki uye $ 50 yeavo vakagadzirwa nedehwe.
Kana ari iwo mavara, isu tine gumi nematanhatu mavara akasiyana muhukuru 16, 18, 20 uye 22 millimeter.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Google inoda asi haigone, aya ndiwo tambo dzeMODE
iFoto Converter, yemahara kwenguva shoma